कानुन बर्खिलाप अमेरिकी मिसेलको ‘कमाउने मिसन’ ! – Tandav News
ताण्डव न्यूज द्वारा	 २०७६ पुष २० गते आईतवार १४:५१ मा प्रकाशित
अमेरिकि नागरिक मिसेल अलेक्जेंंद्रा वेल्सले नेपालको कानुन बर्खिलाप डोनेसन उठाउँदै आएकी छिन् । बिजनेस भिसामा नेपाल रहिरहेकी मिसेलले कानुन र प्रशासनलाई लत्याउँदै आफुखुसी डोनेसन उठाएकी हुन् ।
ताण्डव न्यूजले मिसेलको अवैध कार्य बारे पटक पटक समाचार प्रकाशन गरिरहेको छ । प्रशासन मौन रहेकै बेला, हामीले पुनः मिसेल नेतृत्वको लर्निङ हाउसले ट्रेनिङको नाउँमा बिना रसिद रकम लिएको फेला पारेका छौँ ।
यहि जनवरी ३ अर्थात यही पुस १८ गते (शुक्रबार) लर्निङ हाउस प्रालिमा ‘इन्ट्रडक्सन टू ब्रान्डीङ्ग ः अ मार्केटिङ वर्कसप’ टाइटलमा केहि विद्यार्थी राखेर ट्रेनिङ दिइएको छ । ट्रेनिङ शुल्क १ हजार रुपैयाँ राखिएको थियो । विद्यार्थीहरुले शुल्क बुझाए, तर शुल्क दिएबापतको रसिद लर्निङ हाउसले प्रदान गर्न मानेन । यो समान्य कुरा होला तर यस अघि पनि यस्ता धेरै कार्यक्रम विना विल टिकटको भरमा भएको छ, जुन एउटा प्रालिले गर्न मिल्दैन् ।
ट्रेनिङका लागि गरिएको आह्वान । जसमा १ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएपनि रसिद दिइएन ।
ट्रेनिङका लागि गएका विद्यार्थीमध्ये एकले ताण्डव न्यूजसँग कुरा गर्दै भने ‘१ हजारको रसिद पाइन्छ कि भनेको पाइएन । ट्रेनिङबाट खासै नयाँ कुरा पनि सिक्न पाइएन । उहि अन्य अनलाइन साइटहरुमा देखिएका कुराहरु मात्र देखाइयो । झारा टार्न गरेको कार्यक्रम जस्तो पो देखियो ।’
ट्रेनिङमा सहभागी एक युवतीको गुनासो पनि उस्तै थियो । ‘कार्यक्रम झारा टार्नकै लागि गरिएको जस्तो देखियो । अर्को कुरा शुल्क दिएपछि रसिद नदिने ? अचम्मै भयो ’ ताण्डव न्यूजसँग उनले सुनाइन् ।
शुक्रबार लर्निङ हाउसमा ट्रेनिङ दिइरहेकी मिसेल र सहभागीको नामावली । (गोपनियताको कारण सहभागीको थर ‘ब्लर’ गरिएको छ ।)
नेपालीले डोनेसन उठाउँदा सोझै कारवाही गर्ने प्रशासन, मिसेल काण्डमा किन मौन ?
केहि समय अघि फेसबुकमा रहेको हाम्रो पोखरा नामक ग्रुपका सदस्यहरुले डोनेसन उठाइरहँदा बगरबाट पक्राउ परेका थिए । उनिहरुलाई पक्राउ गर्नुको कारण थियो, प्रशासनसँग अनुमति नलिनु । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि अनुमति नलिई डानेसन उठाइएको पाइएमा कारवाही गरिने भनेर उर्दि नै जारी गरेको थियो ।
तर, अमेरिकि नागरिक मिसेलले पोखरामा खुलेआम डोनेसन उठाइरहेकी छिन् । यसबारे प्रशासन बेखबर रहनु प्रश्नको विषय बनेको छ ।
‘सपोर्ट स्ट्रिट एथलेट्स इन नेपाल’ शिर्षकमा खाता लाइफमा डोनेसन आह्वान गरिएको छ । मिसेलले २०१९ नोभेम्वर ६ तारिकमा आफै एकाउण्डबाट रकम उठेको पुष्टी गरेकी छिन् । जसमा ४५ हजार रुपेँया बार स्क्वायडको नाउँमा चेक देखाइएको तस्विर मिसेल स्वयंले वेबसाइट र समाजिक संजालमा अपलोड गरेकि छिन् ।
स्मरण रहोस्, ‘खाता लाइफ’ अमेरिकामै दर्ता भएको संस्था हो । जुन संस्था नेपालको कुनै पनि प्रशासनिक निकायमा दर्ता छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीकै उर्दि अनुसार पनि यो कार्य सरासर गलत ठहरिन्छ ।
३. चन्दा उठाउनमा प्रतिबन्ध :
मिसेलसँग सम्बन्धीत न्यूज